Taxanaha Tehran waxay u badan tahay inuu yeelan doono xilli labaad. | Waxaan ka socdaa mac
Taxanaha Tehran waxay u badan tahay inuu yeelan doono xilli labaad.
Manuel Alonso | | Apple TV, dhowr
Kama hor istaageyno inaan sii wadno inaan ku baahino warar cusub Apple TV +. Iyadoo la adeegsanayo fikradda ah in adeegga la dhigo safka hore ee baahinta taxanaha iyo barnaamijyada filimada, Apple waxay dooneysaa inay ku sii wado tayada tayada leh. Isla mar ahaantaana, waxay sii waddaa inay kordhiso cutubyada wax soosaarka hadda jira iyada oo fikradda ah in sidoo kale la kordhiyo xaddiga barnaamijka. Hadda waxaan ognahay in taxanaha Tehran waxay u badan tahay inay yeelato xilli ciyaareed labaad.
Taxanaha Tehran, oo xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay mar hore la sii daayay isla markaana leh guul ku filan, waxay u badan tahay inay yeelan doonto ilbiriqsi aan wali aanan haysan xaqiijin rasmi ah. Xaqiiqdii, wax walbaa waxay tilmaamayaan xilli labaad xiisaha Tamar, Wakiilka Mossad wuxuu gudaha u galay magaalada Iiraan.
Ilo rasmi ah wali ma xaqiijin jiritaanka xilligaas labaad. Wax walba waxay ku saleysan yihiin hadalada uu sameeyay Julien Leroux, Maamulaha guud iyo aasaasaha Paper Entertainment. Isaga oo ka hadlaya Madasha Telefishanka Aasiya, Leroux waxa uu sheegay in inkasta oo xilli labaad aan wali la cadeynin sida oo kale, haddana xaqiiqdii waa laga shaqeynayaa.
Waxaan dhihi karaa taas waxaan ka shaqeyneynaa xilli ciyaareedkii labaad. Si rasmi ah looma shaacin, laakiin waanu ku hawlan nahay. Marka waxaan rajeynayaa inaan heleyno war wanaagsan dhamaadka sanadka.
Waxaa jilaya Niv Sultan iyadoo loo raacayo jihada daniel Sykrin, Tehran waxay noqotay mid ka mid ah taxanaha waajibka ku ah in laga arko TV-ga Apple +. Madadaalo soo jiidasho leh oo firfircoon ayaa sugi doona bilowga xilli ciyaareedkii labaad ee xiisaha tuugada.
Xaqiiqdii xilligan labaad yeelan doonaan 8 cutub mar kale sida ugu horeysay, kaas oo hadda gebi ahaanba loo heli karo dadka isticmaala Apple TV + kuwaa oo ku qoran adeegga bil kasta la bixiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Taxanaha Tehran waxay u badan tahay inuu yeelan doono xilli labaad.
... iyo haddii ay ugu yeeraan Isbaanish, waxay noqon laheyd ciyey, tan iyo markii aan ku daalay aqrinta qoraallada hoose iyo in horeyba loogu magac daray.
Sida loo beddelo astaamaha barnaamijka iyo halka looga helo macOS Big Sur
Fasax ayaa na tusaya waxa MacBookgu ku noqon karo midabka madow ee matt-ka